खाने होइन त यो माघे सक्रान्तिमा घरमै बनेको तिलको लड्डू ?
Fri, Feb 21, 2020 at 10:01am
शुक्रबार, २८ पौष २०७४,	आहाखबर	4.97K
काठमाण्डौ,पौष २८ ।
जातीय विविधताको उत्कृष्ट संग्रहालय समेत भनिने हाम्रो मुलुक नेपालमा जातैपिच्छे फरक संस्कृति र चाड रहेको पईन्छ। ति धेरै चाडहरु मध्ये सांस्कृतिक एकताको चाड हो - माघे सक्रान्ति । माघे सक्रान्ति प्रत्येक जसो जात र समुदायका नेपालीहरुले आ-आफ्नै किसिमले मनाउदै आएको पाइन्छ। तर जसले जसरी मनाए पनि सबैको परिकारमा स्थान ओगट्न सफल परिकार हो- तिलको लड्डू । तिल र सख्खरलाई मिलाएर बनाएको तिलको लड्डू माघे सक्रान्तिमा खाने चलन प्राचीनकाल देखि नै नेपालमा चल्दै आएको पाइन्छ। पुषको पाक्य माघको खाक्य भनिने माघे सक्रान्तिमा बनाइने परिकार मध्ये तिलको लड्डूको विशेष महत्व रहिआएको छ। तिलबाट बनेको परिकारले पुष – माघको जाडो याममा हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक ताप र ऊर्जा दुबै दिन्छ। त्यसैले पनि तिलको लड्डू स्वाद मात्र नभएर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट समेत बहुउपयोगी मानिन्छ । त्यसो भए यो तिलको लड्डू बनाउने कसरी त ?आउनुहोस् हामी बताउँछौं तपाईंलाई ।
• तिल – २ कप (२५० ग्राम)
• सख्खर – १ कप (२५० ग्राम )
• काजू- २ चम्चा
• बदाम- २ चम्चा
• सानो अलैंची – ७ - ८ वटा ( पिसेर )
• घ्यू - २ सानो चम्चा
तिललाई राम्ररी सफा गर्नुहोस । तिल भुटनुस्।
एउटा गह्रौं खालको कराहीलाई मज्जाले तताउनुहोस, अनि त्यसमा तिल हालेर ठिक्कको आगोमा एउटा पुन्युले लगातार चलाउँदै जानुस , तिल हल्का खैरो- खैरो हुन्जेल चलाइ रहनुहोस । (तिल हातमा निकालेर छाम्दा चुर हुन्जेल चलाउने . तिल छिट्टै डढछ, da भने तीतो हुन्छ त्यसैले ध्यान पुर्याएर भुटने । भुटेको तिललाई एउटा प्लेटमा खन्याएर एकछिन सेलाउनुहोस् ।
भुटेको तिललाई थोरै थोरै गर्दै कुट्नुस् वा मिक्चरमा खेस्रा खेस्रा पारेर पिस्नुस् ।पुरै धुलो नबनाउनुहोस् ।
सख्खरलाई सानो सानो टुक्रा पार्नुस कराहीमा एक चम्चा घ्यू हालेर तताउनुहोस । अनि त्यी सख्खर का टुक्राहरुलाई त्यो कराहीमा हालेर मन्द आगोमा पागल्नुहोस। जब सख्खर पग्लिसक्छ तब तुरुन्तै आगो बन्द गरिहाल्नुस।यो बिचमा काजू र बदाम काटीहाल्नुस्।
सख्खरमा सबै सामग्री मिसाउनुहोस
सख्खर अलि सेलाउने बित्तिकै यसमा अघिको तिल मिसाईहाल्नुस । अनि काजू बदाम र अलैचीको धुलो पनि मिसाउनुहोस । अब तपाईंको लड्डू बनाउने मिश्रण तयार भयो । त्यो मिश्रणलाई कराहीबाट निकालेर एउटा प्लेटमा राख्नुस् र सेलाउन दिनुहोस् ।
हातमा थोरै घ्यू दलेर चिल्लो बनाउनुहोस् । मिश्रणबाट अलि अलि मिश्रण, लगभग एक चम्चा उठाउनुहोस (लड्डू तातो मिश्रणबाटै बनाउनुपर्छ, मिश्रण चिसो भयो भने जम्न थाल्छ र लड्डू बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ)। गोलो लड्डू बनाएर थालमा राख्नुहोस् । सबै मिश्रणको लड्डू बनाएर थालमा राख्नुहोस ।
अब तपाईंको तिलको लड्डू तयार भयो । स्वादिष्ट लड्डू खान सक्नु हुन्छ।तयारी लड्डूलाई ४-५ घण्टा खुला हावामा राख्नुस । लड्डू सुके पछी त्यसलाई हावा नछिर्ने डब्बामा राख्नुस् , जब मन लाग्छ तब निकालेर खानुस् ( डब्बामा ३ महिना सम्म लड्डू बिग्रिदैन) ।
तपाईं मेवा र अलैंची नहाली पनि परम्परागत तरीकाबाट पनि तिलको लड्डू बनाउन सक्नु हुन्छ है।